MingMing ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း သင့်တွင် ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါက သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည် အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်မေးခွန်းအတွက် အဖြေကို ဤနေရာတွင် ရှာမတွေ့ပါက သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ တောင်းဆိုရန် လိုအပ်ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ကျေနပ်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
1. မင်းဘယ်ကို ပို့တာလဲ။
Jiangyin မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ
2. မင်းကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
WhatsApp:0086-13861647053 တွင် တိုက်ရိုက်ချတ်လုပ်ပါ။
သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အား 0086-13861647053 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ- abby@mmstandingdesk.com
3. စားပွဲတစ်လုံးကို တပ်ဆင်ရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
စားပွဲခုံအတွက် အလယ်အလတ် တပ်ဆင်မှု လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် စားပွဲဘောင်တစ်ခုစီတွင် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ပေးပါသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စားပွဲကို တပ်ဆင်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် များသောအားဖြင့် အစမှအဆုံးအထိ မိနစ် 30 ခန့်ကြာသည်။
4. စုစည်းမှု လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ PDF များကို ဘယ်မှာ ရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
ဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင် စုစည်းမှုစာအုပ်ငယ်ပါရှိပါမည်။ PDF ဗားရှင်းကိုလည်း ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် DESKTOP ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
ဇယားကို drillable လုပ်ထားသရွေ့ သင်နှစ်သက်တဲ့ ဘယ် desktop ကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
6. ကျွန်ုပ်၏မှာယူမှုကို ပို့ဆောင်ပြီးသည်နှင့် မည်သို့ခြေရာခံနိုင်မည်နည်း။
သင်၏ မှာယူမှုကို ပို့ဆောင်ပြီးသည်နှင့် ပံ့ပိုးပေးထားသော ခြေရာခံအချက်အလက်များပါရှိသည့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွင် လှုပ်ရှားမှုမပေါ်မီ 24 နာရီအထိ ကြာနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
7. အော်ဒါကို ဘယ်လို ထားနိုင်မလဲ။
အော်ဒါမှာယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက Alibaba Website တွင် အွန်လိုင်းမှ မှာယူနိုင်ပါသည်။ အခြားမေးခွန်းများနှင့်အတူ၊ သင်သည် abby@mmstandingdesk.com တွင် အီးမေးလ်မှတဆင့် သို့မဟုတ် Alibaba ရှိ တိုက်ရိုက်ချတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
8. ကျွန်ုပ်၏မှာယူမှုတွင် ပစ္စည်းတစ်ခုအား ပမာဏကို မည်သို့ပြောင်းလဲမည် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်နိုင်မည်နည်း။
မှာယူမှုပြောင်းလဲမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Alibaba တိုက်ရိုက်ချက်တင် သို့မဟုတ် သင့်မှာယူမှုနံပါတ်ဖြင့် အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
အခက်အခဲမရှိ ရက် 30 အခမဲ့ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏မူရင်းထုပ်ပိုးမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ရပ်သည့်စားပွဲများအားလုံးကို ရက် 30 အန္တရာယ် အခမဲ့ပြန်အမ်းပေးပါသည်။ မူရင်းထုပ်ပိုးမှုတွင် သင့်ပစ္စည်းများကို အခြေအနေအသစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြန်ပေးသရွေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အပြည့်အဝပြန်အမ်းပေးပါမည်။ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခအတွက် ဝယ်ယူသူတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း သတိပြုပါ။
အောက်ဖော်ပြပါဝယ်ယူမှုများတွင် ပြန်အမ်းငွေကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်မခံနိုင်ပါ။
- ပျောက်ဆုံးနေသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှု
10. လျှပ်စစ်ရပ်ထားသော စားပွဲကို မည်သို့ပြန်ရမည်နည်း။
ပြန်အမ်းငွေအားလုံးကို ရက် 30 အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ အတည်ပြုရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ရုံ သို့မဟုတ် Alibaba တိုက်ရိုက်ချတ်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် မော်တာများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအပါအဝင် ဖရိန်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတွင် အားလုံးပါဝင်သော3နှစ်အာမခံရှိသည်။
အာမခံသည် မူရင်းဝယ်ယူသူအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ချို့ယွင်းနေသည်ဟု ယူဆရသည့် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ပြုပြင် သို့မဟုတ် အစားထိုးပါမည်။
အာမခံဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် abby@mmstandingdesk.com သို့မဟုတ် Alibaba တိုက်ရိုက်ချတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ပါ။
13. အာမခံချက်က ဘာပါလဲ။
MingMing Standing Desk Frame ကိုယ်တိုင်က လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ ထိန်းချုပ်ဘောက်စ်နှင့် ဟန်းဆက်တို့ ပါဝင်သည်။
ထုတ်ပြန်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များအရ စွမ်းဆောင်ရည်။
၃နှစ်အတွင်း ချို့ယွင်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများ။
14. အာမခံချက်ဖြင့် အကျုံးမဝင်သော အရာများ။
Desk Top ၏ ပုံမှန် စုတ်ပြဲခြင်း သို့မဟုတ် စားပွဲဘောင်ပေါ်ရှိ ဆေးသုတ်ခြင်းများ။
MingMing Standing Desk မှ သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကိုင်တွယ်မှု သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် ပျက်စီးသွားသော သို့မဟုတ် လွဲမှားစွာ ကိုင်တွယ်မှု သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ မည်သူ့ကိုမဆို ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် ကြိုးစားပြင်ဆင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ပစ္စည်းတွင် ပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းမှုများ။
မသင့်လျော်သော တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်တပ်ခြင်း
ဖရိန် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။
အခြားမေးခွန်းများအတွက် abby@mmstandingdesk.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။